ကလေးကိုအလုံးစုံအန်တရာယျ ကငျးစဖေို့အတှကျ မိဘတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ အဓိကအခကျြမြား - Chit MayMay
Home Child Care ကလေးကိုအလုံးစုံအန်တရာယျ ကငျးစဖေို့အတှကျ မိဘတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ အဓိကအခကျြမြား
ကလေးကိုအလုံးစုံအန်တရာယျ ကငျးစဖေို့အတှကျ မိဘတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ အဓိကအခကျြမြား
ကလေးရှိတဲ့ မိဘတွေတိုင်း စိတ်ပူရတဲ့ အရာတစ်ခုက မိမိတို့ရဲ့ကလေး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ အန္တရာယ်ကြုံနေမှာကို။ အထူးသဖြင့် မွေးကင်းစအရွယ်နဲ့ တွားသွားအရွယ်မှာ မိဘတွေအနေနဲ့ အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပြီး မတော်တဆအန္တရာယ်တွေမဖြစ်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက် အိပ်တဲ့အခါ လည်စည်း၊ ဦးထုပ်၊ ကစားစရာများ၊ အဝတ်များ၊ ကြိုးများစတဲ့အရာတွေနဲ့ ကင်းဝေးနေဖို့လိုပါတယ်။ ဂွမ်းစောင်ခြုံပေးထားတဲ့ အချိန်မှာလည်း ကလေးရဲ့မျက်နှာမအုပ်မိစေဖို့ မရစ်ပတ်မိစေဖို့ အထူးသတိထားပေးပါ။ ကလေးကို အသက်ရှုကျပ်တတ်ပါတယ်။
မွေးကင်းစကလေးတွေဟာ ပက်လက်အနေအထားနဲ့ပဲ အိပ်စေဖို့သင့်တော်ပါတယ်။
၂။ ချော်လဲခြင်းနဲ့ ဒါဏ်ရာရခြင်း အန္တရာယ်
သင့်ကလေး ချော်လဲစေနိုင်တဲ့ နေရာတွေကလေးအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပရိဘောဂတွေကို အသေအချာဂရုစိုက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမြင့်တွေနဲ့ လှေကားတွေကို သေချာဂရုစိုက်ပါ။ ကလေးလမ်းလျှောက်ကျင့်တဲ့ အရုပ်ကိုအသုံးပြုနေပါက ပူတတ်တဲ့အရာတွေ လက်နဲ့မှီတဲ့ဝါယာကြိုးတွေ လှေကားတွေကို သေချာဂရုစိုက်ပေးပါ။
၃။ အသက်ရှုကျပ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်
သင့်ကလေးမျိုချနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ကစားစရာအသေးလေးတွေဟာ အသက်ရှုကျပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသက်ငါးနှစ်နဲ့ ငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေကို လှီးထားတဲ့ ဟော့ဒေါ့၊ အခွံမာသီးအဆံ၊ သကြားလုံး၊ စပျစ်သီး နဲ့ ပြောင်းဖူးလို့စားစရာတွေကို မကျွေးပါနဲ့။ ကလေးလည်ချောင်မှာနင်တတ်ပြီး အန္တရာယ်များပါတယ်။ သူတို့ပါးစပ်ထဲကောက်ပြီး မထည့်မိစေဖို့ သေးငယ်တဲ့အရာတွေ အမှိုက်တွေကို သေချာရှင်းလင်းထားပါ။ အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်း CPR ကိုသေချာလေ့ကျင့်ထားပါ။
မီးအချက်ပြ alarm ကိုသင်အိမ်မှာတပ်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ သင့်ကလေးကို ဘယ်တော့မှမီးဖိုနားမသွားမိအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မီးဖိုပတ်လည်ကိုအကာအကွယ်ထားပါ။ကလေးလက်လှမ်းမှီလောက်တဲ့နေရာမှာ ထမင်းဟင်းအိုးတွေကို ပန်းကန်တွေကို မထားမိပါစေနဲ့။
မီးပူနဲ့ dryer တွေကိုသုံးပြီးရင် ပလပ်ဖြုတ်ပြီး ကလေးနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမှာထားပါ။ ကလေးကိုချီလျှက်သားနဲ့ ဘယ်တော့မှဟင်းမချက်ပါနဲ့။ ကလေးလက်လှမ်းမှီတဲ့နေရာမှာ မီးခြစ်ကိုမထားပါနဲ့။
တကယ်လို့သင့်ကလေးက အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ယူဆရတဲ့အရာတစ်ခုခုကို မျိုချလိုက်ရင် ဆရာဝန်နဲ့မတိုင်ပင်ပဲ အန်အောင်လုပ်တာတွေ ဝမ်းချူတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ ဆေးဝါးတွေကို မတော်တဆမစားးမိအောင် အထားအသိုဂရုစိုက်ပါ။ ဗီရိုထဲမှာသော့ခတ်ထာရင် ပိုကောင်းပါတယ်. lithium ဘတ္တရီပါတဲ့ နှိုးစက်တွေ၊ ဓါတ်မီး၊ နာရီ၊ ရီမုတ် စတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကို ကလေးနဲ့ဝေးရာမှာထားပါ။
ဆရာဝန်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဆေးရုံဖုန်းနံပါတ်ကို ဖုန်းထဲမှာအသေအချာမှတ်ထားပေးပါ။ လိုအပ်တဲ့အချိန် ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းပါ။
အိမ်သာအဖုံကို သေချာစွာပိတ်ထားပြီး တံခါးကိုလည်းပိတ်ထားပါ။ ရေချိုးခန်းအတွင်း ကလေးရေချိုးပြီးတာနဲ့ ရေတွေကိုသွန်ပစ်ပါ။ ရေချိုးဇလုံမှာ ရေမရှိနေပါစေနဲ့။ တချို့မိဘတွေက ကလေးငယ်တွေကို ရေကူးသင်ပေးပြီး လွှတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ သုတေသနစာရင်းအရ အသက် ၁၀ နှစ်ကနေ ၁၇ နှစ်အထိ ကလေး ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ရေကူးကျွမ်းကျင်ပေမယ့် ရေနစ်ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ကမ်းခြေတွေရေကူးကန်တွေကိုသွားတဲ့အခါ သင့်ကလေးကိုမျက်ခြေပြတ်မခံပါနဲ့။
၇။ W ပုံစံထိုင်ခြင်းအန္တရာယ်
W ပုံစံထိုင်ခြင်းဟာ ကလေးေ
ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပေမယ့် အရိုးပြဿနာ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးခြင်း၊ ကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ များစွာသော ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးကို ဘယ်တော့မှ W ပုံစံမထိုင်ခိုင်ပါနဲ့။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ရှေ့မှာကွေးထားတဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ ထိုင်ခိုင်းပါ။
သင့်ကလေးစက်ဘီးတဲ့အခါတိုင်း ဦးနှောက်ထိခိုက်မှု အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ အကာအကွယ် ဦးထုပ်ဆောင်းခိုင်းပါ။ ကလေးစက်ဘီးရဲ့ရှေ့နောက် မီးသီး မီးခြောက်၊အလင်းပြန်စတေကာစတဲ့အရာတွေ ရှိပါစေ။ ဘရိတ်နဲ့ ဂီယာ၊ ဘီးတွေကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့သတိရှိရှိစီးနိုင်ဖို့ သေချာသင်ကြားထားပေးပါ။
ကလေးရှိတဲ့ မိဘတှတေိုငျး စိတျပူရတဲ့ အရာတဈခုက မိမိတို့ရဲ့ကလေး ပတျဝနျးကငျြမှာ တဈစုံတဈခုနဲ့ အန်တရာယျကွုံနမှောကို။ အထူးသဖွငျ့ မှေးကငျးစအရှယျနဲ့ တှားသှားအရှယျမှာ မိဘတှအေနနေဲ့ အထူးဂရုစိုကျဖို့လိုအပျပွီး မတျောတဆအန်တရာယျတှမေဖွဈဖို့ ကွိုတငျပွငျဆငျထားသငျ့ပါတယျ။
ကလေးတဈယောကျ အိပျတဲ့အခါ လညျစညျး၊ ဦးထုပျ၊ ကစားစရာမြား၊ အဝတျမြား၊ ကွိုးမြားစတဲ့အရာတှနေဲ့ ကငျးဝေးနဖေို့လိုပါတယျ။ ဂှမျးစောငျခွုံပေးထားတဲ့ အခြိနျမှာလညျး ကလေးရဲ့မကျြနှာမအုပျမိစဖေို့ မရဈပတျမိစဖေို့ အထူးသတိထားပေးပါ။ ကလေးကို အသကျရှုကပျြတတျပါတယျ။
မှေးကငျးစကလေးတှဟော ပကျလကျအနအေထားနဲ့ပဲ အိပျစဖေို့သငျ့တျောပါတယျ။
၂။ ခြျောလဲခွငျးနဲ့ ဒါဏျရာရခွငျး အန်တရာယျ
သငျ့ကလေး ခြျောလဲစနေိုငျတဲ့ နရောတှကေလေးအတှကျအန်တရာယျဖွဈစနေိုငျတဲ့ ပရိဘောဂတှကေို အသအေခြာဂရုစိုကျပွီး ပွုပွငျပွောငျးလဲဖို့လိုပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အမွငျ့တှနေဲ့ လှကေားတှကေို သခြောဂရုစိုကျပါ။ ကလေးလမျးလြှောကျကငျြ့တဲ့ အရုပျကိုအသုံးပွုနပေါက ပူတတျတဲ့အရာတှေ လကျနဲ့မှီတဲ့ဝါယာကွိုးတှေ လှကေားတှကေို သခြောဂရုစိုကျပေးပါ။
၃။ အသကျရှုကပျြခွငျးကို ကာကှယျနိုငျဖို့အတှကျ
သငျ့ကလေးမြိုခနြိုငျတဲ့ပစ်စညျးတှေ ကစားစရာအသေးလေးတှဟော အသကျရှုကပျြခွငျးကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အသကျငါးနှဈနဲ့ ငါးနှဈအောကျကလေးတှကေို လှီးထားတဲ့ ဟော့ဒေါ့၊ အခှံမာသီးအဆံ၊ သကွားလုံး၊ စပဈြသီး နဲ့ ပွောငျးဖူးလို့စားစရာတှကေို မကြှေးပါနဲ့။ ကလေးလညျခြောငျမှာနငျတတျပွီး အန်တရာယျမြားပါတယျ။ သူတို့ပါးစပျထဲကောကျပွီး မထညျ့မိစဖေို့ သေးငယျတဲ့အရာတှေ အမှိုကျတှကေို သခြောရှငျးလငျးထားပါ။ အရေးပျေါအသကျကယျနညျး CPR ကိုသခြောလကေ့ငျြ့ထားပါ။
မီးအခကျြပွ alarm ကိုသငျအိမျမှာတပျထားရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ သငျ့ကလေးကို ဘယျတော့မှမီးဖိုနားမသှားမိအောငျ ဂရုစိုကျပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ မီးဖိုပတျလညျကိုအကာအကှယျထားပါ။ကလေးလကျလှမျးမှီလောကျတဲ့နရောမှာ ထမငျးဟငျးအိုးတှကေို ပနျးကနျတှကေို မထားမိပါစနေဲ့။
မီးပူနဲ့ dryer တှကေိုသုံးပွီးရငျ ပလပျဖွုတျပွီး ကလေးနဲ့ ဝေးတဲ့နရောမှာထားပါ။ ကလေးကိုခြီလြှကျသားနဲ့ ဘယျတော့မှဟငျးမခကျြပါနဲ့။ ကလေးလကျလှမျးမှီတဲ့နရောမှာ မီးခွဈကိုမထားပါနဲ့။
တကယျလို့သငျ့ကလေးက အန်တရာယျရှိတယျလို့ ယူဆရတဲ့အရာတဈခုခုကို မြိုခလြိုကျရငျ ဆရာဝနျနဲ့မတိုငျပငျပဲ အနျအောငျလုပျတာတှေ ဝမျးခြူတာတှမေလုပျပါနဲ့။ ဆေးဝါးတှကေို မတျောတဆမစားးမိအောငျ အထားအသိုဂရုစိုကျပါ။ ဗီရိုထဲမှာသော့ခတျထာရငျ ပိုကောငျးပါတယျ. lithium ဘတ်တရီပါတဲ့ နှိုးစကျတှေ၊ ဓါတျမီး၊ နာရီ၊ ရီမုတျ စတဲ့ စကျပစ်စညျးတှကေို ကလေးနဲ့ဝေးရာမှာထားပါ။
ဆရာဝနျရဲ့ဖုနျးနံပါတျနဲ့ ဆေးရုံဖုနျးနံပါတျကို ဖုနျးထဲမှာအသအေခြာမှတျထားပေးပါ။ လိုအပျတဲ့အခြိနျ ဆကျသှယျပွီးမေးမွနျးပါ။
အိမျသာအဖုံကို သခြောစှာပိတျထားပွီး တံခါးကိုလညျးပိတျထားပါ။ ရခြေိုးခနျးအတှငျး ကလေးရခြေိုးပွီးတာနဲ့ ရတှေကေိုသှနျပဈပါ။ ရခြေိုးဇလုံမှာ ရမေရှိနပေါစနေဲ့။ တခြို့မိဘတှကေ ကလေးငယျတှကေို ရကေူးသငျပေးပွီး လှတျထားတတျကွပါတယျ။ သုတသေနစာရငျးအရ အသကျ ၁၀ နှဈကနေ ၁၇ နှဈအထိ ကလေး ၄၇ ရာခိုငျနှုနျးဟာ ရကေူးကြှမျးကငျြပမေယျ့ ရနေဈကွကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ ကမျးခွတှေရေကေူးကနျတှကေိုသှားတဲ့အခါ သငျ့ကလေးကိုမကျြခွပွေတျမခံပါနဲ့။
၇။ W ပုံစံထိုငျခွငျးအန်တရာယျ
W ပုံစံထိုငျခွငျးဟာ ကလေးတှကေို သကျတောငျ့သကျသာဖွဈစပေမေယျ့ အရိုးပွဿနာ၊ ဖှံ့ဖွိုးမှုနှေးကှေးခွငျး၊ ကိုယျနဟေနျထားနဲ့ မြားစှာသော ကနျြးမာရေးပွဿနာတှကေို ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။ သငျ့ကလေးကို ဘယျတော့မှ W ပုံစံမထိုငျခိုငျပါနဲ့။ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ရှမှေ့ာကှေးထားတဲ့ ပုံစံမြိုးပဲ ထိုငျခိုငျးပါ။
သငျ့ကလေးစကျဘီးတဲ့အခါတိုငျး ဦးနှောကျထိခိုကျမှု အန်တရာယျကို ကာကှယျဖို့ အကာအကှယျ ဦးထုပျဆောငျးခိုငျးပါ။ ကလေးစကျဘီးရဲ့ရှနေ့ောကျ မီးသီး မီးခွောကျ၊အလငျးပွနျစတကောစတဲ့အရာတှေ ရှိပါစေ။ ဘရိတျနဲ့ ဂီယာ၊ ဘီးတှကေို သခြောစဈဆေးပါ။ အန်တရာယျကငျးကငျးနဲ့သတိရှိရှိစီးနိုငျဖို့ သခြောသငျကွားထားပေးပါ။
Previous articleကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး သငျ့ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံ ပွောငျးလဲရတဲ့ အကွောငျးရငျးမြား
Next articleကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး ထောပတျသီးစားတာ ကောငျးပါသလား?
ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ ကွုံတှရေလရှေိ့တဲ့ အိပျစကျခွငျးပွဿနာမြား